Ukugxila njalo ku: Quality, Reliability, Service.
Imithombo Yomhlaba Wonke
Indwangu Yesiphethu Sentwasahlobo
Inketho enhle yamaqoqo wakho wejazi lesifutho sentwasahlobo - indwangu ekhanyayo, enemibala ekhanyayo yenayiloni. Kuzokwenza ugqame esixukwini.
Izingubo zokungcebeleka ngokuvamile zingahlukaniswa zibe ezokuzilibazisa nge-avant-garde, ezokungcebeleka kwezemidlalo, ezokungcebeleka kwezothando, ezamabhizinisi nezokungcebeleka zasemakhaya. 1. Ukugqoka okungajwayelekile kwe-Avant garde: Ukugqoka okwejwayelekile kwe-Avant-garde, okwaziwa nangokuthi imfashini ukugqoka okwejwayelekile, kungukuqhakanjiswa kwezithandwayo ...
Uhlelo lwethu lwekhwalithi
Besilokhu siwina ngekhwalithi nekhwalithi futhi sathola ukuqashelwa kwemboni. Ebhizinisini lokuthekelisa, sidinga ukulawula ikhwalithi ngokuqinile. Ngiyethemba ukuletha imikhiqizo yekhwalithi ephezulu kubasebenzisi emhlabeni wonke. Ukulawulwa kwekhwalithi / ukwesekwa kwezobuchwepheshe ...
Khetha iqoqo lakho le-2020 Fall
Ukuwa sekuza kakade, kufanele uhlelele ukuwa kwakho kwangaphandle kwezingubo. Kukhona anhlobonhlobo okufanele ucabangele: izingqimba eziyisisekelo, ama-jumpers, ijazi lemvula, iziphepho zomoya, amajakethi eboya njll. Ukukhetha isendlalelo sesisekelo, kufanele ukhethe indwangu yokusebenza, i-suc ...
Ukwenza iphethini Amandla we-OEM / ODM: Singakhiqiza izingubo ezihlukile njengokuklama / amasampula wakho noma umdwebo wakho noma umbono ovela kuwe. Abasebenzi bethu abenza imodeli abanolwazi bazokunikeza izixazululo. Abasebenzi bethu abanamakhono kanye QC ithimba wi ...
I-QC / Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe: Ithimba lethu le-QC lenza ukugadwa okuqinile nokuhlolwa kusuka kokungavuthiwe kuya emikhiqizweni eningi. - Indwangu izolandelwa ngokwezidingo zamakhasimende, njengesisindo sendwangu, ukwakheka, ikhodi yombala, ukushesha kombala njll. Noma iyiphi inkomba izohambisana ...
Iphrofayili Yokuhweba Sizinikela ekuhlinzekeni insizakalo ephelele nemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Sisekelwe ekwanelisekeni kwekhasimende kanye nezidingo zemakethe. Isiko lethu lebhizinisi ligxile koku: ikhwalithi, insizakalo nokwethembeka. Asithengisi umkhiqizo wethu kuphela ...
Singakusebenzisa noma nini, nganoma yisiphi isikhathi…
Kwenziwa ama-oda we-OEM ne-ODM avela kuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo. Asigcini ngokunikeza ngenkonzo yokuqamba nokukhiqiza kepha futhi nensizakalo yokubonisana ngebhizinisi.